Xalka dhibaatada soo wajahda Apple Watch | Wararka IPhone
Tiro yar oo "hore korsadayaal" oo ka mid ah Apple Watch waxay ka warbixinayaan dhibaatooyinka markii aad ku amreyso smartwatchsidoo kale a isticmaalka xad-dhaafka ah ee batteriga iPhone-ka ee ay ku xiran yihiin, sidaan arki karno on forumyada Apple iyo barta Twitter-ka. Sida ku cad dukumiintiyada ay heleen qaar ka mid ah warbaahinta wararka, Apple horayba way uga warqabtay dhibaatooyinka waxayna siineysaa xalal caawin kara dadka isticmaala.
Isticmaalayaasha leh dhibaatooyinka lacag bixinta waxay yiraahdaan in Apple Watch yahay jidh ahaan ugu xidhan xeedho iyo ogeysiiska inay si sax ah u shubaneyso, laakiin dhab ahaan tamartu ma gaarto ama ma soo gaarto wax ka yar sidii la rabay, sida haddii uusan xariggu ku xirnayn. Xaaladaha qaarkood, dhibaatadu waxay u muuqataa inay tahay software, mid ka mid ah xalka soo socda ayaa laga yaabaa inuu wax ka qabto dhibaatada.
Waan damineynaa oo waxaan dib u bilaabi doonaa saacadda. In tan marka hore la sameeyo waxaan hayn doonaa badhanka dhinacaka dibna waxaan simbiriirixan "slider" si aad u damiso. Marka la baxo, waxaan ku qasbeynaa reboot.
Haddii habka kor ku xusan uusan shaqeyn, waxaan dib u bilaabi doonaa iPhone-ka ku xiran smartwatch, waxaan fureynaa barnaamijka Apple Watch iyo waxaan ka saarnaa dejinta iyo waxyaabaha ku jira u socdaa Guud / Dib u celi. Waxaan saacadda markale isku dhejinaynaa si loo arko haddii wax waliba si sax ah u shaqeeyaan.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaashu waxay ogaadeen in, xaaladdooda, dhibaatadu u muuqato inay jirto cilladaha qalabka, haddii ay sidaas tahay uun waa inay isticmaal dammaanadda si aad u beddesho saacadda ama saldhigga lacag-bixinta. Dhibaatooyinka waxaa baranaya shirkadda Apple.
Dhinaca kale, waxaa jira isticmaaleyaal ka cabanaya isticmaalka batteriga xad-dhaafka ah ee iPhone-yada lammaanaha ah ay dhibaataysan yihiin, xaqiiqo u muuqata inay tahay dhibaato la xiriirta cayayaanka macruufka ah. Waxaa jira xaalado uu barnaamijka Apple Watch ku cuno 31% ee batteriga maalin caadi ah iyo walaac xoogaa badan oo hubiya in, iyada oo aan la isticmaalin ku dhowaad iPhone, ay dhaafto uun duhurkii.
Si loo xalliyo dhibaatooyinkaas, shirkadda uu hoggaamiyo Tim Cook waxay diyaarinaysaa wakiilladooda AppleCare baaritaanno taxane ah, dib-u-soo-kabasho iyo dayactir, sidoo kale waxay ku sameyneysaa tijaabo adabbar USB ah oo ku xiran koronto muddo 5 daqiiqo ah.
Kahor badalashada Apple Watch, wakiiladu waa inay Hubi uumiga uumiga dareeraha gadaal, fiiri saacadda dhaawaca jirka, oo raadi codsiyada sababi kara qashin-baxa batteriga aan dheellitirka ahayn. Haddii aysan wax qalad ah ka helin kuwa aan soo sheegnay, wakiillada ayaa qiimeyn doona haddii xulashada ugu fiican ay tahay isbeddel ama dayactir.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple waxay siisaa xalka Apple Watch amarada soo saarida iyo Qiyaasta batteriga iphone
Guul darrooyinkan hadda Apple wuxuu dhihi doonaa "Ma yaqaanaan sida loo dalaco ama loo lamaaneeyo saacadda tufaax iphoneka
Sida bandgate oo kale ma yaqaanaan sida loo haysto iphone-ka
Waxaad kahadleysay sanad fucking ah qubitaanka batteriga iphone… wifi tricks…. kahor intaadan fiicnayn hada waad nuugtaa
Jawaab Adrian Jz
Kaliya waxaan ku celceliyaa talooyinka Apple.
Waa runtaa dijo
Fadlan waxaan u baahanahay in aan ogaado sida tufaax wachka raran loo soo dajiyay oo uusan u rarneyn
Ku jawaab Fer castilllo
Niman yahow waad salaaman tihiin, lacagteyda Apple daawashada laakiin waxba casaan iskuma rogaan, waa inaan iibsado fiilo kale ama aan aado dukaanka Apple markii aad awooddo, waad ii jawaabtay
Apple Watch wuxuu ahaa cawl mana damiyo, sidoo kale waa mid aad u kulul oo aan qaboobin.
Podcast 1x23 oo ka tirsan Actualidad iPad: Waxaan haynaa Apple Watch waxaanan ka jawaabeynaa su'aalahaaga